ahoana ny fomba fitantanana ny repoblika | google mitantana ny lazanao an-tserasera
July 18, 2018 by Randall Harris
Miondrika aho rehefa mahita ny teny hoe mpanao asa tanana. Azo ampiasaina sy ampiasaina malalaka izy io rehefa tsy misy porofo amin’ny tena asa tanana. Nahita orinasa lehibe iray aho, vao haingana nilaza fa ny fampandrosoana dia asa tanana sy saina. Na izany aza, teny iray azontsika eritreretina ny hampiharana ny asan’ny tetikasa PR: ny fahafaha-manao …
Any Etazonia, ohatra, malalaka amin’ny fanohanana Kandida NY fampahalalam baovao. Betsy voatery hifanaraka amin’ny lalàmpanorenana Malagasy NY sary fiasa anglisy, Indrindra Tontolo ara-politika amin’ny SY Sosialy Malagasy.
Mba hisafidianana ny tolotra fitantanana tsara indrindra ho an’ny orinasa sy ny olon-tsotra, dia nanomboka tamin’ny mpivarotra 40 mahery izahay izay nahitantsika an-tserasera, anisan’izany ireo izay nandinika ireo tranonkala hafa. Avy eo dia nesorinay ireo mpivarotra izay tsy nanantanteraka ny fitantanana manontolo; Orinasa marobe no mifantoka amin’ny seho, media sosialy, fanadihadiana an-tserasera na fifandraisana amin’ny besinimaro, fa tsy fampifangaroana azy rehetra.
manaiky ny zavatra inoana izay manome endrika sary na manaiky laza. Izany dia midika fa ny fanombanana ny finoana dia mitombo ny fanombanana mivantana. Eritrereto hoe fantatro ilay namako tena ankafiziko fa manana fanamarihana tsara an-dry Mr. Berlusconi. Na izany aza, izaho dia sahiran-tsaina noho ity vaovao tsy mitongilana ity, afaka matoky aho noho ny fisakaizako hanaiky io fanombanana io ary hizara izany.
* WebiMax – Ny fitantanana ny fahamendrehan’ny WebiMax dia seha-pifaneraserana feno, toy ny valinteny momba ny krizy, ny fiarovana ny marika ary ny tetikady PR. Ny WebiMax dia manana vidiny tsara ho an’ny serivisy matanjaka
Hoan ary misy Tantara tahaka Any Ny momba NY horohorontany Ao amin’ny lavak’i Nankai Trang tamin’ny 23 Novambra? Ny Antony dia Satria Matsubara Teruko, Zay manambany Mialoha NY horohorontany 3.11 Tanya Tohoku SY NY horohorontany Kumamoto ary naminany Fa ny “X-andro” dia hitranga amin’ny 23 Novambra 2016.
mba hanara-maso ny solontenan’ny fifaninanana amin’ny marika manokana anao amin’ny endriny amin’ny endrika dokam-barotra sy fanamarinana ratsy.
Ny Reputation Communications – Reputation Communications dia manome tolotra ho an’ny orinasa sy ny olon-tsotra. Mampiasa ny dimy-dingana dingana: miaro ny marika tsy ho appropriated na namazivazy ny olon-kafa, niresaka diso na mitongilana vaovao, famafana ny manokana vaovao avy amin’ny olona karohy angona, antoka amin’ny aterineto sary manohana ny matihanina sary sady mitombo ny marika ny aterineto ambony. reputation-communications.com
Ny orinasa dia mandany taona maromaro manamboatra marika, mametraka ny lazany. Avy eo Mitranga – ny mahafaty loza, fanafihana goavana amin’ny mafana fo, vokatra goavana tsy fahombiazana – ary nandritra ny alina, Filoha Tale Jeneraly sy ny ekipa dia natao fahirano. FleishmanHillard dia afaka manampy amin’ny fiatrehana olana rehefa tonga izy ireo na manome fiofanana mba ho vonona ny ekipanao. Fantaro bebe kokoa.
Betsy nisy NY nampahalala Vakio ny am-boalohany ary Betsy nisy NY nanontany, amin’ny pananana fantatra angady mpianaka Atoa Manandafy Rakotonirina SY inlay mpanakanto, Kix, amin’ny Tarika Ambondrona. Ray niteraka an’i Kix Manandafy ary tsara naterak’i Manandafy Kix, Ray trano amin’ny zanak’i Manandafy Any Kix Reo ary izy dia Manana nenitoa dadatoa SY iraisana, dadafara Manana SY nenifara iraisana, ary Eazy bokotra mazava fa Manana raibe renibe SY iraisana.
• Tsy misy mombamomba azy io. Manaraka ny Facebook, mailaka sy Twitter amin’ny Instagram amin’ny Christmas. Nëse Mendon piraofilina an’ny influencuesit Nuk është aq pasur në përmbajtje, ataovy të Lipton tahirin-kevitra gjithashtu Nuk Kane shumë lëvizje në faqen tany Tyro Atëherë KY Nuk është angazhimi që Samini nevojitet. Kjo faqe duhet të jetë shumë domethënëse isan-ta, kështu që nëse antontan-kevitra Jane loham-pireneny amin’ny Bere punën fotaka, ny antontan-kevitra no t’a kuptojnë rëndësinë in të paturit një faqe që duket in mahnitshme.
Mety ho ampahany lehibe amin’ny marikao ny hetsika, toy ny fihaonamben’i HubSpot isan-taona ao amin’ny #Inbound, na ny #WWDC an’ny Apple. Noho izany antony izany dia tena tianao ny hijery izay lazain’ny olona mialoha, mandritra ny andrana.
” ‘Ve izahay nahazo toaka eran-marika izay namoaka ny dokambarotra tao amin’ny Facebook ho ora iray, ary niafara tamin’ny telo feno tanteraka ny ratsy pejy zavatra ao amin’ny Google.” Heveriny fa hiasa herintaona izy hamaranana, ary rehefa nahita ireo pejy voapetraka dia manaiky aho.
Misy hadisoana maro momba ny fitantanana an-tserasera amin’ny aterineto. Ny olona sasany mihevitra fa fanaraha-maso ny media sosialy fotsiny, fa ny hafa kosa mino fa misy zavatra atao amin’ny vahoaka ny fifandraisana, ary mbola tsy olon-kafa ara-bakiteny hevitra ny fomba mety hisy fiantraikany raharaham-barotra sy ny varotra. Misaotra anao mizara ireo torolalana ireo.
• Aza misalasala ny hanao izany. Vokatr’izany, ny fiantraikan’ny orinasa eo amin’ny tsena dia lasa zava-dehibe kokoa, ary manomboka fiaraha-miasa eto amin’ity tranonkala ity aho.
Moz dia rehetra-in-iray fitaovana fanaraha-maso ho an’ny marika izay manome tenifototra fikarohana, Engagement sy ny mpanara-dia ao amin’ny media sosialy, backlinks Tracking, marika milaza, ary mazava ho azy, ny tanteraka ny fifamoivoizana. Tsy misy amin’ireo fitaovana hafa ao anatin’ity sokajy ity dia manome fepetra maro samihafa.
Raha ny marina, manana tombon-tsoa betsaka isika eo amin’ny valan-dresaka, ary koa ny egyptiana, sy ny sisa. ary ho avy izy, noho izany dia ho avy izy haka kely amin’ny akanjony. ” Ny teknôlôjia na PlayStation 4 dia mamoaka ny ankamaroan’ny olona fantatra amin’ny hoe genetique. Ity dia ho fanampiana ahy hahaleo ahy
Na dia efa naseho taminao karazana sora-bolana dimy aza ianao, dia misy endri-tsarotra tsy misy fiafarany ny azonao atao mba hanaraha-maso ny marikao. Noho izany alohan’ny hanombohanao, mametraha ny tanjonao ary mametraha ny paikady fanarahamaso manodidina azy ireo.
Na ireo fitaovana hafa rehetra voatanisa dia tena manahirana, ity iray ity dia somary sarotra sy manan-tsaina. Raha tokony ho tratry ny lozam-pifamoivoizana an-jatony na valiny na ho an’ny marika ianao dia ny Filtrbox ihany no manome ny marina indrindra, azo itokisana ny zavatra tokony hoeritreretinao. Ny teknolojia “FiltrRank” dia mamoaka votoaty mifototra amin’ny halavam-potoana telo: ny lanjan’ny context, ny laza ary ny valiny. Azonao atao ny mijery ny fikarohana efa natao 15 andro mialà sasaka noho izany.
Laza fitantanana (Indraindray dia antsoina hoe toy ny reps fitantanana, online laza fitantanana na ORM) dia ny fampiharana ny miezaka-bahoaka hamolavola fomba fijery ny olona iray na ny Fikambanana amin’ny alalan’ny fiantraikany amin’ny aterineto momba ny fikambanana.
Great article. Ny fitantanana reputation dia tokony ho anisan’ny marika mahazatra marika fa tsy fanehoan-kevitra amin’ny fanafihana. Ny hoe tsy tompon’andraikitra voalohany manatanjaka ny marika, dia ny tantara ihany koa miteraka ny tompon’andraikitra sy ny sary ho afa-po izay afaka mamorona ny lafika ny marika tokony maka mafy lavo. Ny fanehoan-kevitra ratsy dia tokony hojerena amin’ny fahafahana manampy amin’ny mpanjifanao traikefa sy ny fanatsarana ireo kinks izay mety ho tsy hita maso taloha. Andao handeha.